ကြိုးတပ်ဘတ်စ်ကားမော်ကွန်း - ထို rayhab
အခမဲ့လွန်းသည်မည်သည့်မနက်စောစော Al-Adha, စဉ်အတွင်းမြို့တော်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးန်ဆောင်မှုများ၏ Malatya မြူနီစီပယ် (Mota) မော်တော်ယာဉ်များနိုင်ငံသားများဖြစ်သည်။ 11 - နိုင်ငံသားအိမ်ထောင်ဖက်, မိတ်ဆွေများ, ဆွေမျိုးသားချင်းများနှင့်သင်္ချိုင်း၏ရက်စွဲများအကြားကျင်းပပါလိမ့်မည်သည့်အနစ်နာခံ၏ 14 2019 သြဂုတ်လပွဲ, [ပို ... ]
15 - ထိုမြူနီစီပယ်နှငျ့ပတျသကျသောဝင်ပေါက်စာမေးပွဲစာရွက်စာတမ်းများဖေါ်ပြခြင်းအခမဲ့အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကနေအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေမည် 16 ဇွန်လကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေအပေါ် yks'y ဝင်ပါလိမ့်မယ်။ အဆင့်မြင့်ပညာရေးအဖွဲ့အစည်းများစာမေးပွဲ (LDS) ကျောင်းသားများကို၌ဤတနင်္ဂနွေကျင်းပလိမ့်မည်သည့် Malatya မြူနီစီပယ်, အထူးထည့်သွင်းပါလိမ့်မယ် [ပို ... ]
Malatya မြူနီစီပယ်အထူးသဖြင့်သုဿာန်အခမဲ့ဝန်ဆောင်မှုများကိုပေးလိမ့်မည်, အားလုံးလိုင်းများကိုဖြတ်ပြီး Malatya အတွက်မနက်စောစော Al-Fitr ၏ပထမဦးဆုံးနေ့၌ပိုင်ဘတ်စ်ကားနှင့် TRAMBUS motas ။ အဆိုပါ 4-6 2019 ခုနှစ်တွင်ဿွာန်၏ရက်စွဲများသူတို့တွေတွေ့ကြုံခံစားအဆိုပါပြဿနာများ၏နိုင်ငံသားများ, ဇွန်လကနေကျင်းပပါလိမ့်မည် [ပို ... ]
Sanliurfa အတွက်လမ်းမပေါ်တွင်မေလ၏ Bozankaya TRAMBUS ကထုတ်လုပ်
ကုမ္ပဏီ Trambus စီမံကိန်းကြောင့်တက်ရောက်ခဲ့သည်ပြီးခဲ့သည့်ညီလာခံအစည်းအဝေးတွင်Şanlıurfaမြို့တော်ဝန် Nihat Çiftçiလုပ်ပိုင်ခွင့်နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်မှုအတွက်တိုးဖို့အချိန်တန်အပေါ်ပြီးစီးခဲ့မရနိုင်ပေမယ့်မေလထဲမှာtarmbüsကယ်နှုတ်တော်မူပါလိမ့်မယ်, သူကပြောသည်။ စီမံကိန်းနှင့်အခြေခံအဆောက်အဦများအလုပ် [ပို ... ]
မောင်းသူမဲ့လမ်းစမ်းသပ်ခြင်းရတဲ့တစ်ဦးနည်းလမ်းများအဖြစ်နည်းပညာတပ်ဆင်ထားမြောက်အမေရိကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ပထမဦးဆုံးအလမ်းရထား-ရှာဖွေနေပုံဖမ်းတွန်းလှည်း Harbin ၏မြို့၌သူ၏ခရီးစတင်ခဲ့သည်။ ပုံဖမ်းတွန်းလှည်းမီတာရှည်လျားပြီးတစ်နာရီလျှင် 30 70 ကီလိုမီတာနိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီထက်နှင့်အတူအဟောင်း type ကိုလက်တွန်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ [ပို ... ]
70 သန်းပေါင်စီမံကိန်းမှပါဝါဝါယာကြိုးအဘို့အကြောင်းကို 35 သန်းပေါင်ကိုလည်းယနေ့အဆုံးသတ် TRAMBUS2တစ်လကျေးဇူးတော်ကာလကြာအောင်, ရပ်တန့်, လူသိများနှင့်အခြေခံအဆောက်အဦများ, ထမ်းဘိုးအကြောင်းကိုကုန်ကျမည်ဖြစ်သည်။ အခုတော့အများပြည်သူ TRAMBUS [ပို ... ]
Malatya မြို့တော်ဝန်ဟာဂျီUğur Polat, TRAMBUS မှ General Manager အန်နဝါ Sadat Tamgacıမှသတင်းအချက်အလက်ကိုလက်ခံရရှိ motas အလုပ်အကြောင်းကို, ထိုကို Maintenance နှင့်ပြုပြင်ရေးစင်တာတွင်သွားရောက်ခဲ့သည်။ 158 ကင်မရာနဲ့အတူလိုင်းပေါ်တွင်မော်တော်ယာဉ်များကို၏စောင့်ကြည့်လေ့လာမှုကိုဖန်ဆင်းကြောင်းညွှန်ပြခြံ [ပို ... ]
အသေးစိတ်သန့်ရှင်းရေးအဖြစ်နေ့စဉ်သန့်ရှင်းရေးဦးစားပေးလုပ်ဖို့ရွှေ့ဖို့ကားထဲတွင်ခရီးသည်များအတွက်အမြင့်ဆုံးအဆင့်ကို Mota, သန့်စင်နှင့်ပိုပြီးကျန်းမာရေးနှင့်မကိုက်ညီသောပတ်ဝန်းကျင်ကိုဖောက်သည်ကျေနပ်မှုကိုရောက်စေဖို့လုပ်ဆောင်နေ။ နေ့တိုင်းခရီးသည်ထောင်ပေါင်းများစွာ၏အမှုတော်ကိုထမ်းဆောင် [ပို ... ]
Şanlıurfaတဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်, Sanliurfa TRAMBUS အတွက်အစပျိုးနောက်ဆုံးစီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။ Sanliurfa မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးဌာနဒုတိယအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်အမ် Can Hallaçlar, Şanlıurfaတဲ့ Metropolitan belediyesia.ş'yသွားရောက်လည်ပတ်သူကို TRAMBUS စီမံကိန်းကိုရောင်းချသူ။ မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးဌာနဒုတိယအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်အမ် Can [ပို ... ]
ဝန်ကြီးများ Varank, Bozankaya ကြောင့် Eco-Friendly ဘတ်စ်ကားစမ်းသပ်ထုတ်လုပ်အမဲသားကို
စက်မှုနဲ့ Bozanka အဖြစ် Sileo (အသံတိတ်) S10 မော်ဒယ်များဖြင့်ထုတ်လုပ်နည်းပညာဝန်ကြီး Mustafa Varank, ဘတ်စ်ကားများ၏ဘီးနောက်ကွယ်မှယခုခဲ့ကြသည်။ နှစ်ဦးစလုံးဒေသခံတွေမရှိသိသာပတ်ဝန်းကျင်နဲ့သဟဇာတဘတ်စ်ကားများနှင့်လျှပ်စစ်ဝန်ကြီး Varank အတူကပ္ပတိန်ရဲ့ကုလားထိုင်အတွက်ကုမ္ပဏီအကြောင်းကိုထုတ်လုပ်သူထိုင်လျက် [ပို ... ]
အဆိုပါမြူနီစီပယ် Trambus သောအခွင့်ကိုအဆင်ပြေချောမွေ့စေရန်အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်ပါဝင် Sanliurfa, တဖန်, activated မခံခဲ့ရပါဘူး။ 21 နိုဝင်ဘာလအတွက်စေ့စပ်မည်ဖြစ်သည်။ မစ္စတာလယ်သမားနိုဝင်ဘာလ 21 အပြည့်အဝဖြင့်ကြေညာချက်တစ်နေချိန်မှာလွန်ခဲ့တဲ့Şanlıurfaမြို့တော်ဝန် [ပို ... ]
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က Sanliurfa ပို့ဆောင်ရေးခေတ်ထဲမှာ4ခုန်တက်
ဘတ်စ်ကားနံပါတ်နှင့်4ကွဲပြားခြားနားသောလမ်းကြောင်းဝန်ဆောင်မှုများကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်အရေအတွက်ကို 314 နောက်ဆုံး 49 နှစ်စံပြလယ်ကွင်းတဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်အတွက် applications များနားလည်သဘောပေါက်ရန် Sanliurfa အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်နိုင်ငံသားများမှoldu.şanlıurfalတူရကီနိုင်ငံ၏အကြီးဆုံးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကွန်ရက်ကအဖွဲ့အစည်းတွေထဲကတစ်ခုစီမံခန့်ခွဲ [ပို ... ]
TRAMBUS စမ်းသပ်ခြင်း Drive သို့ Sanliurfa အတွက်စတင်
Şanlıurfaအောင်မြင်မှု TRAMBUS စမ်းသပ် drive ကိုအတူပြီးစီးခဲ့သည်။ အမှတ် Balikligol နှင့်အတူမှီခိုရာအကြား၏ 63 ပင် TRAMBUS ဝန်ဆောင်မှုပေးမည်စမ်းသပ်မှု drive ကိုအတွက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏ရှားပါးမှုကိုမပြုဘဲအစဉ်ပြီးစီးခဲ့အပြည့်အဝအမှတ်အသားများကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ Şanlıurfaမြို့တော်ဝန် Nihat Çiftçiမြို့ [ပို ... ]
အဆိုပါမြို့တော်မြူနီစီပယ် BELSAN ၏အထွေထွေညွှန်ကြားမှုဖွငျ့Şanlıurfaမြို့တော်ဝန် Nihat Çiftçiအဆိုပါပြီးစီးခဲ့အဆောက်အဦန်ဆောင်မှုများဖွင့်လှစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ Şanlıurfaမြူနီစီပယ်,3တထောင်စတုရန်းပေဝန်ဆောင်မှုအဆောက်အဦ, အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးယာဉ်မောင်း၏ကျန်တည်ထောင်ထားတဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးရှုပ်ထွေးသော [ပို ... ]
ပုံဖမ်းတွန်းလှည်း Stop မေ့လျော့ခဲ့ကြ Sanliurfa, မသန်စွမ်းကျင်းပခဲ့သည်!
ဘဝမှစီမံကိန်းများ၏အတိုင်းအတာအတွင်းရှောက်သွားသောအခါပုံဖမ်းတွန်းလှည်းများက beleid Şanlıurfaတဲ့ Metropolitan မိဘများကလေးတွန်းလှည်းများနှင့်မသန်စွမ်းလူဦးသုံးပြီးရပ်တန့်ဖို့အတွက်သင့်တော်ဖြစ်ရှာတွေ့ခဲ့သည်။ မြှို့နယ်ရဲ့စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများမေတ္တာရပ်ခံခဲ့သည်ရှေ့မှာဤမကျေနပ်မှု Obviating ။ အာဏာပိုင်များသည်ယခုအခါပြုမူရန်ရှိသည်။ [ပို ... ]
အပြည့်အဝလွှဲအတွက်Narlıdere Interchange အလုပ်အဖွဲ့ကိုသင်
Karaköprüခွဲခြားကြောင်း Diyarbakir လမ်းဇာတ်လမ်း3Narlıdere Viaduct နှင့် Interchange ၏လုပျငနျး၏နှစ်ဖက်အကြားမပြတ်မတောက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအဆောက်အဦအပြည့်အဝမြန်နှုန်းမှာတိုးတက်နေသည်သေချာဖို့မြူနီစီပယ်ခြင်းဖြင့်တည်ဆောက်ဆဲ။ သံမဏိသက်သာရာများအတွက် Sanliurfa အတွက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပိုပြီးနည်းလမ်း [ပို ... ]
Bursa များအတွက်နယူးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး Investments
အဖြစ်အပျက်မီဒီယာဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောအလုပ်လုပ်ခရီးစဉ်နှင့် Aktas နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်. အရေးကြီးသောသဲလွန်စသစ်တစ်ခုဘဝထဲသို့သွင်းထားလိမ့်မည်ပေးသည်, သူတို့ကသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး Bursa တဲ့ Metropolitan မြို့တော်ဝန် Alinur Aktas အတွက်သိသာထင်ရှားသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေလုပ်လိမ့်မည်ဟုမျဉ်းသားများနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများအဆိုပါဖြစ်ရပ်ကိုမီဒီယာလည်ပတ်ခဲ့ [ပို ... ]
Sanliurfa TRAMBUS နည်းလမ်းများAsfaltlanıy
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကŞanlıurfaမြူနီစီပယ် Trambus စီမံကိန်း၌မိမိတို့အသက်တာကိုဖြုန်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၎င်းတို့၏လေ့လာမှုများ၏အဆုံးသို့ရောက်ရှိခဲ့ပါသည်တည်ဆဲပြဿနာတွေကိုကျော်လွှားရန်လူဦးရေရဲ့525 ရာခိုင်နှုန်းတိုးတက်လာခဲ့သည်။ တိုတောင်းသော TRAMBUS စီမံကိန်းများအတွက်သတ်မှတ်ထားသောပထမဦးဆုံးရာဌာန၌နိုင်ငံသားများအပြည့်အဝထောက်ခံမှု [ပို ... ]
ကျွန်ုပ်တို့၏ပြည်တွင်းနှင့်အမျိုးသားရေး TCV အမှတ်တံဆိပ် TRAMBUS
လမ်းများတလျှောက်လျှပ်စစ် katana system ကိုဆွဲထားထံမှဧရိယာအာဏာ, နေရာတွေအတွက်လျှပ်စစ်မီးဘက်ထရီစနစ်ဖြင့်စွဲချက်တင်နိုင်ခြင်းမရှိလိုင်းအရပ်၌တစ်ခန္ဓာကိုယ်ခရီးသည်စွမ်းရည်မြင့်မားသည်ရှိသည်ကြောင့်ရထားလမ်းစနစ်, ရထားလမ်းစနစ်ကအခြေခံအဆောက်အဦများကုန်ကျစရိတ်အနိမ့်ဖြစ်ကြပြီးအခြေခံအဆောက်အအုံမရှိလိုအပ်ချက်ရှိပါတယ် [ပို ... ]
ပြည်တွင်းနှင့်အမျိုးသားရေး TRAMBUS Sanliurfa မှလာမယ့်နေကြသည်
သမိုင်းနှင့် Sanliurfa, TRAMBUS မှအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး Bozanka များ၏ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာစည်းစိမ်နှင့်ကမ္ဘာတွင်ခရီးသွားလုပ်ငန်းအတွက်လွတ်လပ်သောအရပ်ကို၏ခရီးသွားဧရိယာ activated လိမ့်မည်။ ယခု TRAMBUS ပြီးနောက် Malatya နှင့်နှစ်သိမ့် 20 အတွက်အများပြည်သူလက်လှမ်းယူနစ်များကိုထုတ်လုပ်မှ Bozanka [ပို ... ]
Urfa နေ့စွဲတစ်ရှူးဆုံးရှုံးမှုမှာ Data မှ TRAMBUS
Şanlıurfaမြို့တော်, အ TRAMBUS စီမံကိန်းအတွက်ပြင်ဆင်ထားရန်ကောင်စီရဲ့အဖွင့်မြို့ရဲ့သမိုင်းဝင်ထည်ဆာလောင်မွတ်သိပ် Spoor Urfa ဌာနခွဲကသမ္မတ Mehmet Selim ထိခိုက်စေလိမ့်မယ်လို့ဖျောသူအစားစျေးနှုန်းချိုသာခြင်းနှင့်သူတို့စနစ်က havaray ဖို့မာစတာအစီအစဉ်ကိုအကြံပြုခဲ့သည်။ Sanliurfa မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး [ပို ... ]
အဆိုပါ TRAMBUS Bozankaya ကနေတဲ့ Metropolitan Kıyak
အဆိုပါ Bozanka, အခြေခံအဆောက်အအုံနှင့် superstructure အကျင့်ကိုကျင့်ဆောင်ရွက် Sanliurfa တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ် Trambus စီမံကိန်းကြောင့်သေးမိုးသည်းထန်စွာပမာဏနှင့်ရင်ဆိုင်နေရသည်။ ဇွန်လ 8 2018 Bozanka, စာချုပ်ထဲမှာသတ်မှတ်ထားသောတစ်ဦးချင်းစီခရီးသည်စွမ်းရည်အပြီးသတ်ဖို့အလုပ်အကိုင်အများအတွက်သတ်မှတ်ထားသောပစ်မှတ်နေ့စွဲဖြည့်ဆည်းမပေး 300 [ပို ... ]
Sanliurfa လမ်းရှိ TRAMBUS စက်တင်ဘာလ
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး TRAMBUS တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်အပေါ်စီမံကိန်းနားလည်သဘောပေါက်ဖို့ Sanliurfa နောက်ဆုံးကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများလုပ်လေ၏။ လမ်းစီမံကိန်းအတွက်ကောက်ယူအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ၏စီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာအစိတ်အပိုင်းများကို2လအတွင်းtrambüsl၏ Sanliurfa သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်ရည်ရွယ်ချက်များရဲ့ start ပြီးနောက်, စွမ်းအင်စနစ်များလယ်သမား၏နောက်ဆုံးသမ္မတအဖြစ်ပြီးစီးခဲ့ပါသည်ဆနျးစစျ [ပို ... ]
Malatya အခမဲ့အတွက် LDS ကျောင်းသားအားလုံးဘတ်စ်ကား
ထိုရက်သတ္တပတ်၏အဆုံးမှာနှင့်ကျောင်းသားများအကောင်းတစ်ဦးသတင်းပေးခြင်း, စာမေးပွဲဖြေဆို WGS တဲ့ Metropolitan Malatya မြို့တော်ဝန်ဟာဂျီUğur Polat ယူပါလိမ့်မယ်သူကျောင်းသားကျောင်းသူများမှအောင်မြင်မှုစေလိုကြောင်း, ရှိသမျှသောဘတ်စ်ကားစမ်းသပ်မှုနေ့ကအခမဲ့စာမေးပွဲတွင်ကျောင်းသားကျောင်းသူများအပေါ်သယ်ဆောင်လိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်လူငယ်ရက်သတ္တပတ်၏အာမခံချက် [ပို ... ]
ကြိုဆိုအတွက် Mota ဝန်ကြီးများTÜFENKÇİနံနက်စာ
အကောက်ခွန်နှင့်ကုန်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီး Bulent TÜFENKÇİ, Malatya မြူနီစီပယ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်ပြည်သူ့ပို့ဆောင်ရေးန်ဆောင်မှုများ (Mota) ကိုယာဉ်မောင်းနှင့်အတူနံနက်စာပထမဦးဆုံးအပြောင်းအလဲအပေါ်ဖြစ်လိမ့်မည်ခဲ့နံနက်စောစောဘတ်စ်ကားဘူတာသို့ရောက်ကြ၏။ မသက်ဆိုင်စည်ပင်သာယာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများအပေါ်ဆန်းစစ်၏ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်နာရီ concept, [ပို ... ]
Mota ကနေကြေညာချက်ထဲမှာ Malatya မြူနီစီပယ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်ပြည်သူ့ပို့ဆောင်ရေးဝန်ဆောင်မှုအဖြစ်။ နိုင်ငံသားများ, သူတို့ရဲ့အိမ်ထောင်ဖက်, မိတ်ဆွေများနှင့်၎င်းတို့၏ပုဂ္ဂလိကကားများ အသုံးပြု. သင်္ချိုင်းအလည်အပတ်ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှုကိုနှင့်စည်ပင်သာယာ၏လူမှုရေးနားလည်မှုဖြစ်စေတဲ့ခြင်းမှကာကွယ်ရမည့်နိုင်ရန်အတွက်ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်နေစဉ် [ပို ... ]
တရုတ်ကုမ္ပဏီများသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး CAMC Engineering ကိုစီမံကိန်းများအတွက်Şanlıurfaမြို့တော်ဝန် Nihat Çiftçi, Sanliurfa နှင့်အလင်းရထား Eurasia မဟာဗျူဟာတာဝန်ရှိသူများနှင့်လည်းတွေ့ဆုံခဲ့သည်။ Sanliurfa တစ်ဦးသည်ခေတ်သစ်မြို့ဖြစ်သည်သဘောဖွငျ့အဓိကစီမံကိန်းများကိုအကောင်အထည်ဖော်ပြီးနောက် [ပို ... ]
လယ်ပြင် Melid ကုမ္ပဏီအတွက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, ပညာရေး, အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်နှင့်အတိုင်ပင်ခံန်ဆောင်မှုများအတွင်း Mota အတွက် Malatya မြူနီစီပယ်လက်မှတ်အခမ်းအနားကယ်လွှတ်ခြင်းငှါတည်ထောင်ခဲ့ပြီးသင်တန်းအစီအစဉ်တွင်ပါဝင်သည့်ဝန်ထမ်းများအတွက်ကျင်းပခဲ့သည်။ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, ဧပြီ 18 ယင်းမြို့တော်ဝန်၏ရက်နေ့ကကျင်းပသောအခမ်းအနား [ပို ... ]
လမ်းအတော်လေး Malatya, ဧပြီ 23 Trambüလာကြ
ဧပြီလTrambüအတွက်ရိုးရာ 23 မိမိတို့၏နေ့, ကလေးများစဉ်ဆက်မပြတ်ကာလ၌မြို့ခရီးစဉ်စေမည်။ အခမဲ့ကလေးငယ်များအတွက်ယူဖို့မာစတာ 23 ဧပြီလTrambüလမ်းလမ်းကြောင်းမှပြန်လာသောခံရဖို့ကိုထပ်တက်မယ် Malatya မြူနီစီပယ်အဝေးပြေးကား Terminal နှင့် (စရဖခဲ့) တက္ကသိုလ်ကိုစတင် [ပို ... ]
Sanliurfa TRAMBUS သတို့သမီးအဆုံးသတ်စီမံကိန်း
နောက်ဆုံး5အမှတ် TRAMBUS Project မှအလုပျ၏Şanlıurfaမြူနီစီပယ်အတွက်သူတို့ရဲ့ဘဝတွေကိုသွားပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကလူဦးရေရဲ့ 25 ရာခိုင်နှုန်းတိုးလာ Sanliurfa သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်လက်ရှိပြဿနာတွေကိုကျော်လွှားဖို့ပဲ။ နိုင်ငံသားများ၏စီမံကိန်းအပြည့်အဝထောက်ခံမှုပေးသောအဆုံးအဖြတ်အတွက်ပထမဦးဆုံးခြေလှမ်း TRAMBUS [ပို ... ]